दिन ज्ञान को - पोल्टावा चिकित्सा & दन्त एकेडेमी
सेप्टेम्बर 1, 2016, अवकाश को महल मा ज्ञान दिन को अवसर मा “नोभेम्बर” यस शैक्षिक परिषद VDNZ युक्रेन को Solemn बैठक “युक्रेनी चिकित्सा दन्त एकेडेमी”, जो यस वर्ष यसको 95th वार्षिकोत्सव celebrates. जो छ पहिलो वर्ष विद्यार्थीहरूलाई समर्पण आयोजित Solemn बैठक समयमा सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षण पार गरेको छ र युक्रेन को अग्रणी उच्च शैक्षिक संस्थाका एक को एक ठूलो परिवारका सदस्य.
यो समारोह मा क्षेत्रीय र स्थानीय अधिकारीहरु को नेतृत्व उपस्थित थियो, पादरी, प्रशासन सदस्य, संकाय, आमाबाबु र विद्यार्थीहरू आफूलाई पहिलो वर्ष विद्यार्थीहरूले.
अकादमी को Rector खोल्न महान् सभा, युक्रेन सम्मान डाक्टर, एमडी, प्राध्यापक, को विज्ञान युक्रेनी एकेडेमी Vyacheslav Nikolaevich Zhdan को शिक्षाविद्. Rector अकादमी विद्यार्थी र भविष्यमा डाक्टर को मोर्चा बाँध्न गर्न भर्ना संग freshmen स्वागत कामना फलदायी र प्रभावकारी काम, व्यापक विकास, ज्ञान को नयाँ हाइट्स जित्न र इच्छित उद्देश्य हासिल गर्न.
हाम्रो प्रिय अतिथि गरिएका अभिवादन: युक्रेन को मानिसहरूको उप, युक्रेन Ischeykin KE सम्मान वैज्ञानिक, पोल्टावा मेयर आमा वायुसेना, स्वास्थ्य पोल्टावा क्षेत्रीय राज्य प्रशासन Kurilko यू को उप निर्देशक, आफ्नो Eminence बिशप Filaret Henichesk Novokakhovskiy र जो इमानदारीसाथ क्षेत्र र युक्रेनमा सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय को एक एक परिचय संग विद्यार्थीहरू congratulated र हालको freshmen को सबैभन्दा एकेडेमी सामेल विश्वस्त व्यक्त र हाम्रो देश को उपलब्धिहरू गुणन.
उदात्त वातावरण पहिलो वर्ष विद्यार्थीहरूको Solemn शपथ को घोषणा बेला हल मा शासन गरे, जो उत्कृष्ट प्रशिक्षण जान्छ, राम्रो व्यवहार र सक्रिय सामाजिक गतिविधिहरु. सम्मान सही विद्यार्थीको शपथ पढ्नुहोस् VDNZU “एमएसए” प्रदान Porovay Olesya र व्लादिमीर Ksonzu. र unanimously समयमा “म कसम खान्छु!” आफ्नो व्यावसायिक जीवन राख्नु सेतो कोट र टोपी मा पहिलो पटक Freshmen.
अकादमी को एक परम्परा Rector अनुसार, प्रोफेसर वीएम Zhdan freshman विद्यार्थीले प्रतीकात्मक विशेषताहरु हस्तान्तरण: देशको ज्ञान र विद्यार्थी आईडी गर्न प्रमुख.
रोचक पनि एक फिलिम संरचना को रूप मा जानकारी छ, शैक्षिक, पुष्ट, विश्वविद्यालय को कलात्मक उपलब्धिहरू, यो अवसर र उत्कृष्ट संभावनाहरु खोल्दछ freshmen एकेडेमी बारेमा. वर्तमान मा कुनै शंका भन्ने थियो VDNZU “युक्रेनी चिकित्सा दन्त एकेडेमी” – अत्यधिक योग्य तयार जो आधुनिक शैक्षिक संस्था, रचनात्मक पेशेवरहरुको, वास्तविक पेशेवरों.
हाम्रो देश को स्वतन्त्रता र निष्ठा लागि आफ्नो जीवन जो दिनुभएको खसेको को स्मृति मा समारोह मिनेट गरेको मौन समयमा.
नमिलेका नै साँझ Dvornik एक ड्राइभिङ. र एक. सबै विद्यार्थीहरू तर्फबाट Lyevshyn आफ्नो हेरविचार लागि सबै आमाबाबुले आफ्नो मूल्यांकन व्यक्त, धैर्य र असीम प्रेम.
एक सभामा सहभागी लोक कला अवैतनिक collectives एकेडेमी गर्ने सुन्दर गीतहरू र नृत्य प्रस्तुत स्वागत.